Momba anay - Ruisheng International Trade Co., Ltd.
Ruisheng International Trade Co., Ltd.
Izahay dia Agent Agent Sales and Purchasing specialised amin'ny Sakafo Sakafo sy Additives Sakafo.
Ny foiben-toeranay dia any Jiaxing City, lalana fohy miala ny seranam-piaramanidina Shanghai Pudong & Hongqiao.
Ekipa efa za-draharaha amin'ny Sales, Sourcing ary Supply Chain Management specialists izahay izay manana traikefa iraisan'ny 20 taona mahery amin'ny akora sakafo.
Manome fanohanana farany izahay, mampifandray ny mpanjifantsika amin'ny vokatra mety mifanaraka amin'ny zavatra ilain'izy ireo manokana.
Manome fanampiana sy fampandrosoana ho an'ny fampandrosoana ny tsena any amin'ny firenena 30 mihoatra ny Azia atsimo atsinanana, aostralia, eropa, afrika ary amerika atsimo izahay.
Manana tambajotra mpiara-miombon'antoka amin'ny famatsiana azo antoka izay miara-miasa aminay izahay hiantohana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay rehetra.
Izahay dia ny fifanarahana manokana miaraka amin'ireo mpanamboatra paty paty vera sy legioma tsy ampy rano.
1. legioma tsy ampy rano
Manolotra karazana legioma avo lenta izahay (amin'ny ankapobeny na amin'ny fonosana mahazatra)
chives tsy ampy rano, tahony maitso tsy ampy rano, karaoty tsy ampy rano, tongolo tsy ampy rano, tongolo lay tsy ampy rano, broccoli tsy ampy rano, laisoa tsy ampy rano, cauliflower tsy ampy rano, vovoka legioma tsy ampy rano
2. Paty veromanitra / Vermicelli
Karazan-tsiro manamarina tena mahaliana
Noodle vera momba ny legioma eo noho eo, Starch Noodles, Starch ovy, Starch ovy, Starchio Tapioca
3. Additives amin'ny sakafo
Izahay dia mitondra karazan-tsakafo fanampiny mahazatra sy mahazatra (amin'ny ankapobeny na fonosana mahazatra)
Mpamamy (Fructose & Stevia), Thickeners, Nutrient Enhancers, Preservatives, Antioxidant, Acidulant, Vitamina, Asidra amino, Proteinina legioma, Pea Fiber, Starches Corn, Starches novaina
Ketchup, Akora mafana
5. Additives amin'ny famahanana
Sakafo gluten katsaka, Proteinina vary, Sakafo trondro, Sakafo akoho
Fitantanana ny tohitohim-pamatsiana
Mailaka sy mailaka ary mahomby isika
Hikaroka na dia ireo vokatra sarotra hita aza
Faly izahay fa miantehitra amin'i Ruisheng ho mpanjifany mividy azy manokana any Shina ny mpanjifanay.
Azontsika atao koa ny manampy ny varotra ny mpanjifanay manokana entana hiverina any Shina.
Inona no azon'i Ruisheng atao aminao?
Ny orinasa tsirairay dia samy manana ny takiny avy.
Ny tanjonay dia ny hanome serivisy fitarainana amin'ny mpanjifa rehetra mba hahazoana antoka fa samy mahazo ny vahaolana tsara indrindra mifanaraka amin'ny filanareo ianareo.
Ny loharano avy any Shina dia mety goavana.
Ataonay tsotra ho anao izany.
Izahay no ho mpiorina tokana anao mahatoky ho an'ny karazan-tsakafo kalitao marobe.
Mino mafy izahay fa na dia zava-dehibe aza ny vidiny - ny soatoavina mandresy amin'ny andro ho an'ny orinasa rehetra.
Hiara-miasa akaiky aminao izahay hahalala ny zavatra ilainao hanaterana ireo vokatra mety eo am-baravaranao. Ruisheng dia manana ny fahaizana miasa amin'ny maha Agent Agent anao any Shina mba hanohanana ny fampandrosoana bebe kokoa ny vokatra sy ny fampiharana vaovao.
Ao Ruisheng ny fampanantenanay dia hanome toky anao ny vokatra avo lenta izay hanome anao ny fahombiazan'ny vidiny tsara indrindra.
Ny tanjonay dia ny hahafahanao mahazo tombony betsaka.
Ny tanjonay dia ny fametrahana fiaraha-miasa ara-barotra maharitra amin'ny mpanjifanay rehetra.
Teny filamatra mivoaka Fandresen-dahatra hahazoana tombony iraisana.
Ruisheng Business Concept
Miasa akaiky, mirindra ary mangarahara amin'ny mpanjifa rehetra hahazoana antoka fa mahazo izay ilainao ianao.
Hampiasainay ny traikefanay momba ny loharanom-pahalalana, ny fahaiza-mifampiraharaha, ny fahalalana ara-teknika ary ny tambajotra midadasika mba hiantohana ny mpanjifa tsirairay avy amin'ny vokatra omenay.
Ny ekipanay tsara indrindra dia afaka mandray an-tanana sy mandrindra am-pilaminana izay fanamby rehetra.
Izahay dia mametraka ny finoanay ny maodelin'ny fiaraha-miasa ataon'ny mpanjifa ary manome lanja lehibe ny vokatra sy ny kalitaon'ny mpanjifa rehetra.
Ny rafi-pitantanana Order Order izay voahaja tsara dia hitazona anao hatrany amin'ny fanontanina, ny santionany, ny filaminana ary ny satan'ny fandefasana ary koa ny fiantohana ny antontan-taratasy mety sy ilaina rehetra.
Manantena mafy izahay ny hanampy anao amin'ny zavatra takinao.
Taurine, Karoty marobe, Vovoka karaoty maina, Ovy omena sakafo, L - Phenylalanine (PHE), Vermicelli,